Anopfuura 10 Makore ane ruzivo se Professional Recliner Manufacturer
Anji shanda sechikwata nevatengi vedu.
Nhoroondo yedu kare
JKY fenicha yaive kambani yekutengesa kubva mugore ra2005-2009, Isu tinonyanya kupa zvigadzirwa zvevamwe vatengi.Takaona kuti zvaive zvakaoma kuwana rutsigiro rwakanaka kubva kumafekitori mazhinji, Sample yaive yakakwana, kurongeka kwakawanda kwaizogara kwakasiyana kana uchienzaniswa nemuenzaniso wekurongeka.Nguva yedevery yaizogara iri musoro mukuru.Saka kubva Gore ra2010, tinosarudza kutanga fekitori yedu Kusvika izvozvi.
Kubva 2010 kusvika zvino, tanga tichiita produciton kweanoda kusvika 12years.Isu tanga tichinyanya kugadzira ese marudzi ese emagetsi ekusimudzira chigaro, recliner sofa, imba yemitambo, uye mamwe marudzi erecliners.Isu tanga tichitengesa kunze kwenyika dzinopfuura makumi mana dzakasiyana, tichibatsira vatengi vangangosvika zana nemakumi mashanu kusarudza nekusimudzira zvigadzirwa zvavo, vachiita sarudzo yavo nyore.
Gore ra2021, Nyamavhuvhu, JKY yanga ichienda kufekitari nyowani ine 150000suare metres chivakwa.Iyo yakagadzirwa ndeye 5S standard.Zvese zviri pasi pekutonga kwakasimba, chinhu chinonyanya kukosha ndechekuti huwandu hwekugadzira huchawedzerwa kusvika ku220containers panguva, nguva yekuendesa inogona kudzorwa mu25-30days.Ichi chinhu chinonakidza kune vese vatengi vedu veJKY uye vatinoshanda navo.
Fast Dispatch Mukati 25days nokuda Standard Zvigadzirwa;
Isu tanga tichitumira kune dzinopfuura 40 nyika dzakasiyana
Yakabatsira vangangosvika 150vatengi kusarudza nekusimudzira zvigadzirwa zvavo
fekitari ine 150000suare metres kuvaka
Ichawedzerwa kusvika ku220containers panguva
Inowanikwa muYangguang Industry Zone, Dipu Town, Anji City, Zhejiang Province, China.
Isu tiri imwe nyanzvi yekugadzira fenicha uye mutengesi we Manual Recliner Sofa, Magetsi
Recliner Chair, Riser Recliner Chair, Recliner Sofa Set, Living Room Sofa, Theatre Recliner
Chikwata chedu chine makore anopfuura gumi eruzivo rweKugadzira, manejimendi, kugadzira uye
kutengesa muindasitiri iyi.Saka tine mbiri yakanaka muindasitiri iyi.
Panguva imwecheteyo, isu tiri mutengesi akavimbiswa naAlibaba.com uye SGS.
Tinoda kusuma Advantages edu nezve kambani uye zvigadzirwa.
1> Kupfuura 10 Makore ane ruzivo seProfessor Recliner Manufacturer
2> A Wide Range yeChigadzirwa mitsara
3> Fast Dispatch Mukati 25days nokuda Standard Zvigadzirwa
4> OEM uye ODM Yakagamuchirwa
5>Sanganisa midziyo Inogamuchirwa
6> Factory Direct Competitive Price
8> Macheya Akagadzirwa
9.>Tag yako yezita rekambani yakawedzerwa pachigaro
10> Fenicha dhizaini rubatsiro kana ichidikanwa
11> Kodzero dzakasarudzika dzinoremekedzwa
12> Anji shanda sechikwata nevatengi vedu
Wekishopu yedu inoshandisa michina yemazuva ano kugadzira zvigadzirwa zvekirasi yekutanga.
Zvigadzirwa zvatinotenga ndezvemhando yepamusoro saka tinokwanisa kugadzira chigadzirwa chemhando yepamusoro.
Tine timu ye Quality controllers inoongorora chikamu chega chega chekugadzira chirimwa, cheya yega yega inotariswa kakawanda panguva yekugadzira & chigaro chinocheneswa zvakakwana chisati chaiswa mubhokisi.
Zvimwe Zvitupa zvedu
300 Pound Mailbox